Prof Maxamed Siciid Gees oo ka Sheekeeyey Taariikh-nololeedkii Marxuun Cali Qoorseef – hogaanka.org
Hargeisa(HWN):-Geerida ayaa laga horaysiiyey nolosha. Waxa la isugu xidhay geerida iyo nolosha
Hargeisa(HWN):-Geerida ayaa laga horaysiiyey nolosha. Waxa la isugu xidhay geerida iyo nolosha sida aayaddu sheegtay in dadka lagu jitaabiyo sida ay ugu kala dhaqmaan ifka ay joogaan. Jidka toosan Rabbaw.
Illaahay ha u naxariisto Marxuun Cali Maxamed Xasan(Oorseef). Waxa Marxuunku ku dhashay magaalada Berbera hooyada reer magaalanimada iyo ilbaxnimada dadka Somaliland, Somali Galbeed iyo Puntland.
Marxuun Cali Qoorseef waxa uu waxbarashadiisa ku qaatay Berbera iyo Sheekh. Waxa uu aqoonta hawlaha maraakiibta, dekadaha, kastamada uu ku soo bartay: waddanka Iran waqtigii boqorku (Shaah) xukumo jiray iyo wadankii Federal Germany Republic ee West Germany la odhan jiray.
Boqortooyada Sucuudiga ayuu u shaqo tegay, dabadeena ganacsi u gaar ayuu galay.Sannadkii 1992, Marxuun Cali Qoorseef ayuu Hargeysa iyo Berbera ku soo noqday oo burbursan ilaa maanta 2020 sidii ayuu u joogay. Waxa uu door weyn ka qaatay dib-u-dhiskii dalka, gaar ahaan Wasaaradda Maaliyadda ee halbawlaha qaranka ah. Waxa uu ka mid noqday shaqaalihii u horreeyey ee loo qaatay kastamka Berbera (1993) ee Madaxweyne Cigaal imtixaanka ka qaaday, kuwaasoo Marxuun Cali uu noqday qofkii ugu sarreeyey imtixaankaasi.
Waxaanu ka soo qaadaney maqaalkan hadhwanaagnews
Hadii aanu nahay bahda hogaanka.org waxaanu tacsi u diraynaa qoyskii ,qaraabadii,asxaabtii iyo umada reer Somaliland ee uu ka baxay Marxuum Cali Qoorseef samir iyo iimaan inuu inaga siiyo , Waxaanuna uga baryaynaa Allah (swt) naxariistii Jano inuu siiyo aamin, aamin ,amiin yaa Rabi….
ISBARBAR DHIGA NABADGELYADA SOMALILAND IYO NABAD LA’AANTA SOMALIYA Previous
Democracy imperiled in Africa by ‘reformers’ turned dictators Next